I-Benadryl Engasileli: Yiziphi Izinketho Zakho? - Imininingwane Yezidakamizwa | Septhemba 2021
Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Ezokuzijabulisa Izidakamizwa Vs. Umngani Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imidlalo Umphakathi Ezemidlalo Ezisindayo Inkampani, The Checkout Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> I-Benadryl engazeli: Yikuphi ongakhetha kukho?
I-Benadryl engazeli: Yikuphi ongakhetha kukho?
Ama-antihistamine, njengeBenadryl, angenye yezindlela zokwelapha ezihamba phambili zokunciphisa izimpawu zokungezwani komzimba nokubandayo. Kepha ukozela kungumphumela ojwayelekile we-antihistamine, futhi kwesinye isikhathi kungaba kubi (noma kubi) kunokuthimula noma ukuhogela. Ukozela okuvela kuma-antihistamine kungadala ukuncishiswa kokuxhumana nokusheshisa ukusabela, okwenza imishini yokushayela neyokusebenza ibe yingozi kakhulu. Kunzima kakhulu - futhi kujwayelekile - ukuthi abanye abantu bathathe iBenadryl njengesisizo sokulala, kwesinye isikhathi esiholela ekuthambekeni kokulala. Ama-antihistamine adala ukozela angakhuphula ingozi yokuwa kwabantu abaneminyaka engaphezu kwengama-65. Ngenhlanhla, kulabo abafuna ukugwema izingozi zalowo muzwa wobuthongo, kunama-antihistamine ahlukahlukene angazeli.
yenza izicubu zisize ngokucanuzela kwenhliziyo nokuhlanza
Ukungezwani komzimba kwenzeka lapho izinto ezingezwani nomzimba — ezifana nempova, isilwane esifuywayo, amakinati, ukulunywa omiyane, noma i-ragweed — zidala amakhemikhali emzimbeni okuthiwa ama-histamines. Lapho ikhiqizwa, ama-histamine abangela ukungezwani komzimba nezimpawu ezifaka ikhala eligcwele; isifuba nokuqubuka kwesikhumba; noma ukulunywa umphimbo, amehlo, noma ikhala.
Ama-antihistamine yimishanguzo eshibhile futhi etholakala ngaphezu kwekhawunta. Zinciphisa noma zivimba ama-histamine, zivimbela izimpawu zokungezwani komzimba. Ama-antihistamine asiza ukunciphisa izimpawu zokungezwani komzimba ezibangelwa ukungezwani kwemvelo, kwesizini, noma kokudla.
Ama-antihistamine esizukulwane sokuqala
Ama-antihistamine esizukulwane sokuqala (athuthukiswe eminyakeni engaphezu kwengu-60 edlule) avame ukudala ubuthongo. Amanye amagama womkhiqizo ajwayelekile afaka:
Ama-antihistamine esizukulwane sokuqala asemakhondweni amaningi e-over-the-counter (OTC) nemithi ebandayo, njenge-Nyquil noma i-Advil PM. Lezi ngezinye ze esetshenziswa kakhulu izidakamizwa emhlabeni.
uyini umehluko phakathi kwe-losartan ne-valsartan
OKUhlobene : Ngabe kuphephile ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha umuthi wokwaliwa?
Ama-antihistamine wesizukulwane sesibili nesesithathu
Ama-antihistamine wesizukulwane sesibili kanye nesizukulwane sesithathu adalwe kamuva nje. Lawa ma-antihistamine abangela ukozela okuncane futhi adinga ukuthathwa kaningi usuku lonke ukuze asebenze kahle. Lawa ma-antihistamine awahlali phansi.
Ama-antihistamine wesizukulwane sesibili, aqala ukwethulwa ngo-1981, afaka uClaritin (loratadine) noZyrtec (cetirizine). Ama-antihistamine esizukulwane sesithathu, amasha sha emakethe, afaka i-Allegra (fexofenadine).
Ama-antihistamine wesizukulwane sesibili nesesithathu nawo angaba nokuhlukahluka okuqukethe i-pseudoephedrine (isithako esisebenzayo eSudafed). Lawa ma-antihistamine afaka i-Allegra-D, Claritin-D, noma iZyrtec-D. Inhlanganisela ye-pseudoephedrine ne-antihistamine iyasiza ngokucinana kwamakhala ngaphezu kokukhululeka kokungezwani komzimba.
Ngabe uBenadryl uyozela noma akozeli?
Ukozela kungumphumela omkhulu wecala likaBenadryl nomphumela ohlangothini ovamile kuwo wonke ama-antihistamine esizukulwane sokuqala. IDiphenhydramine isithako esisebenzayo eBenadryl kanye nezinsiza zokulala ze-OTC.
Ngenkathi kungekho mkhiqizo weBenadryl ongazeli otholakalayo, kukhona ama-antihistamine angahlali phansi, njengeZyrtec noma i-Allegra. Ukuphumula kungumphumela owodwa weZyrtec, noma kunjalo, ngakho-ke kungenzeka kungabi inketho engcono kakhulu ongayithatha ngaphambi kokulala.
umehluko phakathi kukavithamini d2 novithamini d3
Ingabe ikhona i-antihistamine engezeli?
Ama-antihistamine wesizukulwane sesibili nesesithathu, njengoClaritin no-Allegra, akhangiswa njengama-antihistamines angezeli. Ucwaningo luthole ukuthi ngenkathi ama-antihistamine wesizukulwane sesibili nesesithathu engaba nawo ukuthambisa okuthile imiphumela kubantu ngabanye, kungukuthi a okuncane kunama-antihistamine esizukulwane sokuqala.
Yimuphi umuthi ongcono kakhulu wokungezwani nezinto ezithile ongazeli?
Imithi yokungezwani nokwelashwa okungeyena owozelayo ingelapha ukungezwani komzimba nomzimba. Lokhu kufaka phakathi ama-antihistamines angezeli, njenge:
I-Claritin (loratadine) : Le antihistamine yesizukulwane sesibili inciphisa imiphumela yama-histamines futhi imise okubangela okuholela ekuthimuleni, ekhaleni eligobayo, ekulungeni nasemehlweni amanzi. Imiphumela emibi ifaka phakathi ubuhlungu besisu, ikhanda, nokukhathala. Umthamo ojwayelekile weClaritin yi-10 mg tablet eyodwa kanye ngosuku. I-Claritin yezingane nayo iyatholakala ngesimo samathebulethi angahlafunwayo nesisombululo soketshezi.
I-Zyrtec (cetirizine) : Le antihistamine yesizukulwane sesibili inciphisa imiphumela yama-histamines, imise okubangela okuholela ekuthimuleni, ekhaleni eligobayo, ekulungeni, amehlo anamanzi, kanye nasezinyangeni. Imiphumela emibi ifaka phakathi ikhanda, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, ubuthakathaka nokungazinzi. Umthamo ojwayelekile we-Zyrtec yi-5 kuya ku-10 mg tablet ngomlomo kanye ngosuku. I-Zyrtec yezingane iyatholakala kumathebulethi angaqhekeka kanye nesiraphu.
I-Allegra (fexofenadine) : Le antihistamine yesizukulwane sesithathu inciphisa imiphumela yokungezwani komzimba nenkathi ethile yonyaka. Iphatha ukuthimula, ikhala eligobayo, ukuluma, namehlo anamanzi. Imiphumela emibi ibandakanya ikhanda, isicanucanu, amajaqamba okuya esikhathini, nokozela. Umthamo ojwayelekile we-Allegra uyithebhulethi eyodwa engama-60 mg kabili ngosuku, ngokufakwa okugunyaziwe okufika ku-180 mg ngosuku. I-Allegra yezingane iyatholakala njengoketshezi olunephunga namaphilisi angenakunyibilika.
Hlala uthintana nochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo — njengosokhemisi wakho — uma ungaqiniseki ngomuthi wokungezwani komzimba owulungele kakhulu. Usokhemisi anganikeza iseluleko sezokwelapha mayelana nokuthi yikuphi imithi yokungezwani komzimba ongayiphuza ngenkathi ukhulelwe futhi ukuhlanganisa kanjani imithi yokungezwani komzimba .
Ungazigoma kanjani izingane zakho ekolishi
Umthamo we-Atenolol, amafomu, namandla
lisebenza kangakanani uhlelo b ngemuva kwezinsuku ezintathu
Ungayithenga yini imishanguzo kadokotela eMexico
amaphesenti amangaki abantu ane-autism
ungathatha ibuprofen ngemuva kokuthatha i-tylenol
ubuhlungu bendlebe ngenxa yekhambi lasekhaya elibandayo
uyini umthamo ophakeme kakhulu we-melatonin